Induction Susceptor Heating amin'ny vokatra indostrialy
Fanafanana Susceptor induction
Ahoana ny fiasan'ny fanamorana ny susceptor induction?
Ampiasaina ny susceptor ho an'ny induction heating ny fitaovana tsy mitarika toy ny seramika sy polymera. Ny suseptor dia hafanain'ny rafitra fanamafisana induction, izay hamindran'ny conduction hafanana ny fitaovana fiasana. Ireo mpampiditra dia matetika vita amin'ny gazy karbonika, molibdenum, grafita, vy vy ary fitaovana fitaovam-pitantanana hafa.
Miaraka amin'ny fanafanana suseptor, mampiasa induction izahay mba hanafanana «susceptor conductive vy», izay manafana fitaovana faharoa na amin'ny alalàn'ny fifandraisana mivantana na amin'ny taratra.
Inona no atao hoe Heating Indact Susceptor?
Ny hafanana Susceptor amin'ny alalàn'ny Induction dia nampiharina betsaka tamin'ny fizotrana izay tsy hafanaina na tsy mora hafanaina miaraka amin'ny fanafanana fampidirana ilay fitaovana hafanaina. Ny faritra metaly sy tsy metaly dia mety hafanaina ankolaka amin'ny alàlan'ny fampiasana «susceptor», entin'ny induction. Ireo mpampijaly dia mety mifandray na tafasaraka amin'ilay ampahany na fitaovana hafanaina. Rehefa mifampafana ny fanafanana dia amin'ny alàlan'ny fitarihana, raha ny fanafanana misaraka dia taratra.
Ny teny hoe "susceptor" izay ampiasaina amin'ny fanamafisana induction dia midika fitaovana mandeha amin'ny herinaratra napetraka eo anelanelan'ny coil fanafanana induction sy ny fitaovana hafanaina toy ny workpiece, na solid, slurry, ranoka, gazy, na fitambaran'ny etsy ambony. Amin'ny endriny tsotra indrindra, ny Induction Susceptor Heater dia mety ho fantsom-by mifampitohy eo anelanelan'ny coil sy ilay fitaovana hafanaina. Ny suseptor toy izany dia hafanain'ny saha elektromagnetika natsangan'ny coil induction ka ny ampahany dia hafana amin'ny alàlan'ny taratra na fitarihana avy amin'ny susceptor mafana. Ny fampiasana «susceptor» dia manome fitaovana mahomby amin'ny fanafanana fitaovana tsy mitarika toy ny seramika, vera, plastika, semiconductors, akora simika biolojika sy tsy organika, sakafo, zava-pisotro amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny fanaraha-maso, ny fahombiazany, ny fiakarana haingana ary ny fahamendrehana tombony azo avy amin'ny fampiasana solika fampidinana / famatsiana herinaratra. Volavola sy famatsiana HLQ fampitaovana fanamoriana susceptor induction manomboka amin'ny fantsona tsotra ka hatrany amin'ny conveyor, augers, ary rafitra sarotra hafa.
Ireo mpiorina an-tsokosoko dia mety hovolavolaina sy ampiasaina hiarovana / ampinga faritra amin'ny faritra iray izay tsy ampidirina amin'ny sehatry ny fampidirana ka mifehy ny lamina hafanana azo. Amin'ny tranga sasany, izy ireo dia antsoina hoe mpanodina na ampinga. Amin'ny tranga toy izany, ny susceptor dia manarona ny ampahany amin'ilay ampahany miaro azy amin'ny alalàn'ny herinaratra. Raha tsy mihodinkodina tanteraka ilay faritra ny susceptor, dia miaraka ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny fanafanana mivantana any amin'ireo faritra tsy misy fiarovana ary koa amin'ny taratra sy ny fitaritana avy amin'ny suseptor. Amin'ny tranga maro dia miaro ny susceptors amin'ny varahina vita amin'ny rano izay tsy tokony hafanaina mihitsy ireo faritra arovana amin'ilay faritra.
Amin'ny ankapobeny, ny fanafanana suseptor amin'ny fampiasana an loharanom-panafanana fampidirana dia fitaratra sy / na fanafanana conduction fotsiny. Na izany aza, maro ny endri-javatra mahatonga azy ho mora azo ovaina. Voalohany, ny suseptor dia hafanaina elektromagnetika, mamela ny fanafanana amin'ny alàlan'ny quartz, vera, na efitrano mangarahara hafa mangarahara ho an'ny fifehezana sy fifehezana ny atmosfera. Faharoa, ny susceptor manify dia miasa ho toy ny loharano taratra izay azo hafanaina haingana ary hampangatsiaka raha ilaina, ka mamorona loharano mafana izay afaka manova ny mari-pana haingana be. Ny fanamafisana induction izay ahafahan'ny suseptor azo itokisana kokoa noho ny zava-misy fa ny suseptor maripana ambony dia tsy voatery ampifandraisina amina mpampita vaovao ankehitriny mba hanomezana ny angovo ilaina amin'ny fanafanana. Ny susceptor dia mety misy habe aminy. Amin'ny faritra misy geometry sarotra, ny suseptor dia manatsara ny fitovian'ny hafanana, raha ampitahaina amin'ny fanafanana mivantana. Ireo mpampiditra dia mamela ny fitaovana manify be toy ny vy na tariby vy hafanaina amin'ny hafanana avo kokoa amin'ny alàlan'ny alim-pandrefesana mavitrika ambany sy antonony kokoa. Rehefa mandinika ny famolavolana fanamainana susceptor dia misy antony maromaro izay misafidy ny fitaovana suseptor sahaza azy, tafiditra ao anatin'izany ny fiasa miaraka amin'ny tontolo iainana izay ifandraisan'ny suseptor. Ny fisafidianana ny fitaovana mety dia mitarika amin'ny rafitra azo antoka, ny fisafidianana ireo fitaovana diso dia mety hitarika amin'ny fandotoana sy ny fahombiazan'ny fahatokisana ambany.
Fampiharana fanamafisam-peo ho an'ny mpitsindroka induction
Mametaka fanamafisana induction azo ampiharina ho an'ny fanafanana ny fitaovana tsy metaly sy metaly rehetra, avela ho fitaovana lehibe amin'ny famokarana sakafo sy zava-pisotro, akora simika, elektronika, vera, plastika, fingotra, fanamboarana, fanafody ho an'ny mpanjifa ary vokatra indostrialy.
Sokajy Technologies Tags mividy Susceptor Heater, HF Susceptor Heating, Ahoana ny fomba fiasan'ny fanafanana fampidirana Susceptor, Induction Susceptor Heater, Fanafanana Susceptor induction, susceptor, susceptor Heater, Vidin'ny heater an'ny Susceptor, Heuse Susceptor, Fitsipiky ny fanafanana ny Susceptor, Teoria amin'ny fanafanana ny Susceptor, Inona no atao hoe Heating Indact Susceptor Post Fikarohana
Ny varimbazaha fanamainana induction miaraka amin'ny fomba fanamainana induction